Shandisa iyo Elementary OS desktop nharaunda pane Debian 8 | Linux Vakapindwa muropa
Kana zvakadaro akauya kuzoshandisa Elementary OS kana kuti vakazoziva zvishoma nezvake kuburikidza nemavhidhiyo kana mifananidzo, ivo vanozozviziva izvo iyi Ubuntu-based Linux kugovera ine yayo desktop desktop iyo isingawanikwe chete kune yako system, asiwo kune vamwe.
Zvakanaka, nharaunda yatiri kutaura nezvayo ndeye Pantheon. Iyi nharaunda yakatanga seimwe nzira yekubatanidza iyo vanhu vanogona kuisa muUbuntu, nekufamba kwenguva uye nekuda kwekugamuchirwa kukuru kwakaitwa nharaunda iyi, muvambi weElementary OS Daniel Fore akasarudza kugadzira chimwe chinhu chavo uye ndozvazvakaita Pantheon uye Elementary OS.
Iyo Pantheon desktop nharaunda ine zvimwe zvakafanana neGNOME Shell uye MacOS kunyanya Pantheon yakanyorwa kubva pakutanga uchishandisa Vala uye iyo GTK3 turu yekushandisa.
Iyo Pantheon tafura zviri nyore kwazvo uye zviri nyore kudzidza Chaizvoizvo chaive nezvinhu zviviri, iro pani uye dhoko.
Nekutadza, haugone kuisa mifananidzo padesktop, iko kurudyi-padesktop kwakaremara, kuti uchinje Wallpaper kana kuwana zvimwe zviito zvauchazoda kuwana marongero ehurongwa.
En pamusoro pechiso ndiyo menyu "Zvishandiso", pakati pane nguva nezuva, uye kurudyi zviratidzi. Zviratidzi zvinokuzivisa nezve mamiriro azvino ezvikamu zvako, senge netiweki yekubatanidza, bhatiri simba, email uye chat account, uye system ziviso.
Kurutivi rwekuruboshwe kwepaneru pane chinhu "Zvishandiso" nekudzvanya pa "Zvishandiso" Launcher ichaonekwa neese maapplication akaiswa, aya anogona kugoverwa mumapeji akati wandei ezvishandiso zvichienderana nenhamba yawakaisa, kufamba mazviri unogona kuzviita uchishandisa ma locator pazasi kana scrolling.
Ivo vanogona zvakare kushandisa iyo yekuona yekusarudza kumusoro kumusoro kuti uchinje pakati peye grid maonero uye yechikamu maonero.
Uyewo inogona kutsvaga maapplication kana marongero ehurongwa nemazita kana kiyi kiyi uye ita zviito zvine chekuita navo, senge yekupedzisira mirairo, nyora mitsva mitsva kubva kunyorera tsamba, kudzima uye kutangazve.
1 Maitiro ekuisa Pantheon pane Debian 8 Jessie?
2 Maitiro ekubvisa Phanteon kubva kuhurongwa?
Maitiro ekuisa Pantheon pane Debian 8 Jessie?
Kuisa ino desktop desktop pane yedu system, isu tine iyo nzvimbo yekuti kune yakatsaurirwa dura reizvi, isu tinongofanirwa kuzviwedzera kune yedu runyorwa.
Nokuda kweizvi isu tinongofanirwa kuvhura terminal uye nekuita unotevera kuraira:
Waita izvi, ikozvino isu tinofanirwa kuwedzera makiyi kune iyo system neinotevera system:
Isu tava kugona kugadzirisa runyorwa rwedu rwe mapakeji, tinozviita nemurairo uyu:
Chekupedzisira, kubvira sisitimu payakaona shanduko kuti pakaiswa repositi nyowani, ikozvino tinogona kuisa Pantheon pane yedu system nemirairo inotevera:
Iyo yekurodha uye yekumisikidza nguva inoenderana neyako internet kubatana, saka zvinogona kutora chinguva.
Kana kumisikidza kwaitwa nemazvo, tinogona kuenderera mberi nekuvhara yedu mushandisi chikamu kuti titange chikamu chedu, asi ikozvino nedesktop nharaunda yakaiswa, kunyange sarudzo yakakurudzirwa kutangidza komputa.
Maitiro ekubvisa Phanteon kubva kuhurongwa?
Kana paine chero chikonzero iwe chaunoda kusunungura ino desktop desktop kubva kune yako system, iwe unofanirwa kufunga kuti unofanirwa kunge uine imwe nharaunda imwe yakaiswa pane yako system nekuti zvikasadaro iwe ucharasikirwa nemifananidzo yakajeka uye uchafanirwa kushandisa komputa yako mukati chinouraya.
Kuti tinunure nharaunda, isu tinofanirwa kuvhura terminal uye nekuita inotevera mirairo:
Chekupedzisira, zvinongosara kuti utange kunakidzwa neyako nyowani desktop desktop pane yako system, iwe zvakare unozogona kuziva mamwe maturusi anoumba ino yakanaka nharaunda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Shandisa iyo Elementary OS desktop nharaunda pane Debian 8
shamwari dzakanaka ndine dell 11z ye11 inches.
vhidhiyo kadhi iri intel g45, ini ndine debian uye ndinoda kuisa madhiraivha, ini ndaedza zvavanotaura mumaforamu uye ndapedza kudzoreredza zvese ...
Unogona here kundibatsira kuiisa, kana kana paine chero yekuvandudza.?
Hi Daniel .. kunyangwe Debian iri rakanakisa, mune dzimwe nguva uye kunyanya kana zvasvika pamalaptop, zvinowanzo kuve nani kuisa kugovera kunoenderana neDebian, inonzi Ubuntu. Izvi zvine akati wandei shanduro uye kubva pane zvandinoona pamushini wako iyo Ubuntu Mate ingave yakanaka, nekuti iwo muchina une mashoma zviwanikwa uye kunyanya nekuda kwehukuru hwechidzitiro.
Misiyano: vatyairi .. kana madhiraivha. MuUbuntu, - uye ndosaka ndichigara mairi - ivo havasi ivo chete vanofambidzana neazvino tsanga, asiwo nekuremekedza vatyairi.